Allgedo.com » 2013 » February » 19
Home » Archive Daily February 19th, 2013
Soomaalida Minneapolis oo ku talaabsatay guul siyaasadeed (Daawo Video)
Waa barnaamij muuqaal ah oo ka warbixinaayo qariirada magaalada Minneapolis iyo dhalinyaro somaaliyeed oo badalay qariirada magaaladaas, si qowmiyada somaalida ay fursad ugu helaan in ay kaga qayb galaan siyaasada magaaladaas. Barnaamijka waxaa raacsan waraysi Abdi Warsame oo ah aqoon yahan Somaaliyeed oo aas aasay isla markaana gudoomiyey gudi Somaaliyeed oo la yimid hindisihii dib loogu badalay...
Kaddiib markii uu maalintii shalay Guddoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kaliil uu si cad uga soo horjeestay shir la sheegay in February 23 lagu qaban doono magaalada Kismaayo, kaasoo lagu dhisayo maamul goboleed ay majaraha u hayso dowladda Kenya oo aanay u dhameyn bulshada ku dhaqan Jubbooyinka, ayaa waxaa kulan qad Teleefan oo ay xalay isugu yimaadeen Guddiga Xiriirka iyo Dib u heshiisiinta...
Madaxweynaha Puntland oo Qaabiley Wafdi uu hoggaaminayo Ergayga Gaarka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya.
Wafdiga Midowga Yurub iyo Madaxweynaha Puntland ayaa la sheegay in ay ka wada hadleen Arrimaha nabadgelyada, nidaamka Xisbiyada badan ee Puntland iyo arrimaha xuquuqda aadanaha sida xorriyatul qawlka. Shirka oo saxaafaddu banaanka ka joogtey ayaa markii uu soo dhamaadey waxaa si wada jir ah warfidiyeenada ula hadley Madaxweynaha Puntland iyo ergayga Midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Michele Cervone Ergayga...
Muqdisho, Soomaaliya (AOL) – Febraayo,19 2013 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Muqdisho ku soo dhaweeyay Xildhibaan Keith Ellison oo ka tirsan xildhibaanada Maraykanka. Kulankan oo qaatay muddo 45 daqiiqo ah ayuu Madaxweynaha wuxuu ku wargeliyay Xildhibaanka muhiimadda uu leeyahay xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Mareykanka. ...
Dad ku Sumoobay Biyo ay Cabeen oo loola Cararay Isbitaalka Kismaayo.
Qoyskaan oo ku sumoobay biyo ay cabeen xilli ay ku sugnaayeen Degmada Badhaadhe ee Gobalka Jubadda hoose ayaa waxaa xaaladooda caafimaad loola soo cararay isbitaalka guud ee Magaalada Kismaayo. Agaasimaha Isbitaalka magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubada hoose Cabdi Samad Abiikar Xaaji ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay xaaladda Caafimaad ee dad ku sumoobay biyo oo ku jira Isbitaalka. Cabdi Samad Abiikar...
Madaxweynaha Soomaaliya oo Qaabiley Xubin ka Socdey Congreska Mareykanka
Keif Elison oo ah xubin ka tirsan Koongareeska Mareykanka ayaa Garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho waxaa kusoo dhaweeyay xubno ka tirsan Dowladda Soomaaliya,waxaana garoonka diyaaradaha uu kulan saacado qaatay kula qaatay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu kala hadlay arimo dhowr ah oo quseeya Soomaaliya iyo wada shaqeynta koongareeska Mareykanka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan...
Kulan looga Hadleyey Amniga Garowe oo ka dhacay Xarunta Gobolka
Kulan ballaran oo ay soo qaban-qaabiyeen guddiga Amniga Gobolka Nugaal ayaa maanta ka dhacay Guriga Gobolka Nugaal, kulankan waxaa ka soo qaybgalay Duqa magaalada Garowe Cabdicasiis Cilmi Koor, Guddoomiyaha Gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali (Qarjab), Taliyaha Qaybta Gobolka Nugaal Faarax Warsame,Guddiyada xaafadaha Garowe iyo weliba dadweyne kale. Kulankan ayaa daba socda dilkii naxdinta lahaa ee loo...
Maamulka Gobolka SH. Dhexe oo sheegay in ay Qorsheynayaan in ay la wareegaan deegaanada kale ee Gobolkaasi
Xilli ciidanka Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay la wareegeen gacan ku haynta Garoonka Diyaaradaha ee Degmada Jowhar ayaa saraakiisha Gobalka Shabeelaha Dhexe waxa ay sheegeen inay qorsheynayaan la wareegida deegaano hor leh oo ka tirsan Gobalkaasi. Cali Cismaan Ibraahin Guddoomiye ku xigeenka Gobalka Shabelaha dhexe oo la hadlay Warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in maalmaha soo socda ay la wareegayaan...
Magalaada Gaalkacyo oo Labo Ruux lagu diley iyo Taliska Booliska oo ka Hadley Dilkaasi
Wararka ka imaanaya Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug ayaa sheegaya in xalay kooxo hubaysan ay halkaasi ku toogteen labo ruux oo kamid ah dadka deegaanka. Dilkan labada ruux ayaa wuxuu ka dhacay xaafada Garsoor ee dhanka bari Magaalada Gaalkacyo halkaasi oo rag biskoolado wato ay ku toogteen labadaasi ruux halka sidoo kale mid kale ay dhaawaceen. Jaamac Maxamed Axmed Taliyaha qeybta Booliiska...